vendredi, 31 mai 2019 12:26
Toliara: May ny biraon'ny SRMV Toliara II
Ny alin’ny alakamisy hifoha ity zoma 31 mey 2019 ity no may ny biraon'ny vaomiera mpanisa vato ato amin’ny Distrikan’i Toliara II. May ny fitaovana sy ny antotan-taratasy maro.
Doro trano niniana natao sa loza noho ny olana ara-teknika ? Efa tonga nijery ny zava-misy ny solontenam-panjakana, nanokatra fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao hamantarana ny fototry ny loza sy ny tomponantoka amin’izany.
Mifanontona anatin’ny savorovoro ateraky ny fanoherana voka-pifidianana solombavambahoaka ny fisehoan’ity fahamaizan’ny SRMV Toliara II ity.
Mipetraka eto ny fanontaniana hoe tsy nisy fepetra noraisina mikasika ny fanamafisana ny fiarovana sy ny fiambenana ireo masoivoho misahana ny fifidianana ve no tonga amin'izao ?
Teo aloha dia ireo manana finoana Silamo ihany no nahazo jour férié ny famaranana ny ramadany.
Tamin'ity taona ity kosa dia ny rehetra mihitsy no natao andro tsy hiasana fa handraisana karama izany andro izany, mba tsy hiangarana amin'ny finoana hafa.
vendredi, 31 mai 2019 09:11
Senatera Tsangadahy Eugène Simon: Voahosopotaka tamin’ny haino aman-jery
Niala tamin’ny fahanginany ny Senatera Tsangadahy Eugène Simon manoloana ny fanambarana nataona olona iray avy any Midongy Atsimo, niditra mivantana tamin’ny fotoanan’ny fampahalalam-baovaon’ny fahitalavitra tsy miankina iray teto an-drenivohitra, ny alin’ny 30 mey 2019, ary nilaza fa “mitondra tafika hanakorontana ny CENI any an-toerana ity Senatera ity, mba hanodina ny valim-pifidianana”.
Nilaza ny Loholona Tsangadahy Eugène Simon fa « fitompoan-teny fantatra (affirmation gratuite) miampy fanalambaraka ankarihary no nataon’ilay olona tao amin’io fahitalavitra tsy miankina io satria nanonona ny anarany.
Araka ny filazan’i Tsangadahy Eugène Simon dia manohana kandida tsy miankina iray ny tenany, izay mitarika vonjimaika amin’ny elanelam-bato mihoatra ny 400 manoloana ny kandidan’ny vovonana “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” izay faharoa vonjimaika. “Manao ny tetika rehetra ny IRD mba hanilihana an’ilay kandida tsy miankina izay tohanako ary mitana ny laharana voalohany vonjimaika” hoy izy.
vendredi, 31 mai 2019 08:59
Maroantsetra: Mafanafana ny raharaham-pifidianana
Nitohy teo amin’ny kianja monisipaly, omaly, ny hetsika fanoherana fanodinkodinana safidim-bahoaka tamin’ny fifidianana solombavahoaka natao ny 27 mey 2019 teo, araka ny ambaran’ireo olona maro nandray anjara tamin’izany. Talohan’io dia efa nisy andian’olona nilanja sorabaventy teny anoloan’ny Distrika.
vendredi, 31 mai 2019 08:54
Amboasary Atsimo: Haneho ny tsy fankasitrahany ny fifidianana depiote
Hanao filaharam-be sy kabary ny eto Amboasary Atsimo rahampitso sabotsy 1 jona, hanehoan’ny olona ny tsy fankasitrahany an’iny fifidianana solombavambahoaka natao tamin’ny 27 mey 2019 iny.
Tranga iray amin’ny maro, isany nahatezitra ny olona ny tao Ankamena Tanatsoa, tsy nisy iray ampahatelon’ny olona voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana ny isan’ny bileta tokana tonga tao amin’io biraom-pifidianana.